yunei – OOTDMYANMAR
4 FEEL-GOOD RECOMMENDATIONS IF YOU’VE BEEN EXTRA STRESS LATELY
No Comments on4FEEL-GOOD RECOMMENDATIONS IF YOU’VE BEEN EXTRA STRESS LATELY
လတ်တလောမှာ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသူတွေအတွက် စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Yun Ei မှ ရေးသားထားပါသည်။
Remember, It’s okay to put yourself first! While it’s acceptable to worry about important things like family and career, we also need to check ourselves if we feel like takingabreak! Besides, you deserve to relax and treat yourself. Here are some feel-good tips:
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဦးစားပေးဖို့ အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်း သတိရပါ။ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု၊ အလုပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ အရေးကြီးကိစ္စတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်တာက လက်ခံနိုင်စရာကိစ္စဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်အချိန်မှာ အနားယူဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုလည်း သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ဦးစားပေးပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနားယူဖို့လည်း ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Do social media detox. (Social media detox လုပ်ပါ။ )
Photo Credits @yunnei21
Reading the news can make you feel stressed. Though it’s okay to stay updated with current events, scrolling through your feed may be bad for your mental health. On the bright side, going offline will give you time to have fun like readingabook, drinking coffee, or walking in the park.
သတင်းတွေဖတ်တာက စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိထားတာကောင်းပေမယ့် newsfeed ကို တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေခဏအနားယူလိုက်တာက စာဖတ်ဖို့၊ ကော်ဖီသောက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့အတွက် အချိန်တွေပိုလာပါလိမ့်မယ်။
2. Listen to some music. (သီချင်းနားထောင်ပါ။)
While doing work, you can de-stress with your feel-good music playing in the background.
အလုပ်လုပ်နေတုန်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေဖွင့်ထားပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
3. Shop for your essentials. (လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပါ။)
Online shopping can be so therapeutic! Remember treating yourself is an act of self-love. But you still need to consider how much you’re spending. It helps to prioritize the things you really need.
အွန်လိုင်းကနေဈေးဝယ်တာက စိတ်အပန်းပြေစေပါတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို လုပ်ပေးခြင်းကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တဲ့အပြုအမူဆိုတာ သတိရပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အတိုင်းအတာထိသုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့ သေချာချင့်ချိန်ရပါမယ်။ အဲ့ဒါက ကိုယ်တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဦးစားပေးဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
4. Eat at your favorite restaurant or order. (ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးဆိုင်မှာစားပါ ဒါမှမဟုတ် မှာစားပါ။ )
Having the time to eat your favorite meal can beatreat. While some of the restaurants may be closed you can opt your favorite food by ordering online.
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေ ဝယ်စားတာကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံခြင်းပါပဲ။ တချို့ဆိုင်တွေကပိတ်ထားပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်တွေကို မှာစားလို့ရပါသေးတယ်။
Tags health, mentalhealth, ootdmyanmar, yunei
Join 112,095 other followers